Iindaba-Inkqubo yeNdibano yePCB kunye nePCB
I-PHILIFAST yenza ngokwezifiso uhlobo lwe-PCB ukuhlangabezana neemfuno zabathengi bethu. Ngophuhliso olukhawulezileyo noluthe gqolo lwetekhnoloji ye-elektroniki, iibhodi zesekethe eziprintiweyo ziyilelwe ngokubanzi kwaye zafakwa kuzo zonke iintlobo zamasimi ukwanelisa iimfuno zoluntu
Nciphisa iindleko zakho: I-Turnkey PCBA Assembly; Isisombululo se-BOM sokunciphisa iindleko; Ingcebiso ngezoBuchule kulwazi lwakho loyilo.
√ UkuQinisekiswa koMgangatho: ISO14001, IATF16949, UL Certified; I-100% ye-AOI / yovavanyo lwe-E / iX-reyi / iNkqubo yokuSebenza kunye noVavanyo loMsebenzi ixhaswe.
√ Ekuhanjisweni kwexesha: Ukuhlaziywa kweXesha leOdolo yokwenene; Inkqubo yokuvelisa engenanto; Ukuhanjiswa kwangexesha kwe-99 nge-DHL / UPS / FeDex / TNT.
Service Inkonzo yabaThengi ngeyona ndlela: Iiyure ezingama-24 ezikwi-Intanethi; Emva kwexesha- ukuthengisa ingxelo ngeeyure ezili-12; INkxaso kubuGcisa
Sibonelela zombini prototype PCB kunye nemveliso ngobuninzi, ukuxhasa inkonzo UKUCACISA. Ii-PCB zethu zigubungela i-1- 32 yamanqwanqwa e-PCB eqinileyo, siyakwazi ukwenza ii-bоаrdѕ ezintsonkothileyo, umz. , Iziphumo zethu zenyanga zingaphezulu kwe-20000m2, zonke iimveliso zethu ziyahambelana ne-UL, CE, RoHS, ISO9001 ...
Inkqubo yeNdibano yePCB
Sinikezela ngeenkonzo zokujika ezisisiseko ze-EMS, kubandakanya i-PCB elungelelanisiweyo, ukuthengwa kweenxalenye, indibano ye-PCB. Iinkonzo ezongezelelweyo ezinje ngenkqubo ye-IC chips, uvavanyo lomsebenzi, inaliti yokubumba eyenziwe ngokwezifiso kunye nendibano yemveliso egqityiweyo ...
I-PHILIFAST inikelwe kwimveliso ye-PCB, kwindibano ye-SMT kunye ne-THT ngaphezulu kweminyaka elishumi, banamaqela eenjineli ezininzi abanamava kwaye bazinikele ekusebenzeni. Zonke izinto ozididayo ziya kusonjululwa kakuhle kwi-PHILIFAST.